Waa maxay qoraalka HTML-ga? - Dib u eegis Heerka
Dareemaha qoraallada HTML waa hab sahlan oo lagu arki karo oo loo keydiyo qoraalka bogga internetka. Qalabkan, waxaad xoqin kartaa dukumiintiyada HTML iyo waxaad ka heli kartaa macluumaad macne leh mudo ah ilbiriqsi. Haddii aad niyadjabto sababtoo ah boggaagu wuxuu leeyahay qoraalka aan la xakamayn oo raadinaya xal sax ah, qoraalka HTML-ga ayaa ah doorashada saxda ah.
Qoraal daabacan HTML wuxuu leeyahay waxyaabo fara badan - cec computer engineering company. Qaar ka mid ah ayaa laga wada hadlay hoos.
1. U qalmida barnaamijyada
Barnaamijyada iyo kuwa aan barnaamijka ahayn, soo saaraha qoraallada HTML ayaa soo saari doona codadka iyo qoraalka bogagga shabakadaha la rabo. Uma baahnid inaad haysato xirfadaha barnaamijka si aad u isticmaasho qalabkan. Bedelkeeda, waxaad u baahan tahay aqoon aasaasi ah oo ku saabsan HTML iyo Python si aad shaqo u hesho. Qalabkani ma aha oo kaliya ku habboon barnaamijyadeeda laakiin sidoo kale waa shirkado, bilawga, wariyeyaasha, iyo ardayda.
2. Qoraal sawireed HTML ah oo loogu talagalay naqshadeeye
Naqshadeeye webka ayaa mas'uul ka ah samaynta naqshad qurux badan iyo bogag internetka ee macaamiishiisa. Haddii aad tahay naqshad websaydh xirfad leh oo leh tiro badan oo faylasha HTML ah si loo soo saaro, waa inaad isku daydaa qoraalka HTML. Qalabkani wuxuu hubinayaa ilaalintaada iyo asturnaantaada internetka, helitaanka xogta si fiican loo xoqay. Intaas waxaa sii dheer, waxay ururineysaa oo ka dhigaysaa macluumaadka laga helo sawirada iyo fiidiyoowga, taas oo fududeyneysa inaad abuurto naqshado sharraxaad leh.
3. Qoraal daabacan HTML ee dhammaan nidaamka qalliinka
Mid ka mid ah sifooyinka ugu kala duwan ee qoraalka qoraalka HTML waa in uu ku shaqeeyo dhammaan nidaamyada Windows. Waxaa intaa dheer, qalabkan waxaa lagu dhejin karaa daalacad kasta oo internetka ah waana mid aad uwanaagsan isticmaalayaasha Windows 98, Me, 2000, NT, Vista, XP, 7and 8. Waxay ka fujin doontaa feylkaaga waxayna soo saareysaa qoraalka qaab la akhrisan karo.
4. Waxay abuurtaa oo maamushaa wakiilada iyo qoraallada
Iyadoo la adeegsanayo qoraalka HTML, webmasters waxay abuuri karaan oo maamuli karaan labada qora iyo wakiilada si fudud. Waxay soo jeedineysaa talaabooyinka isbedbeddel tiro badan waxayna fuliyaan shaqooyin kala duwan oo loogu talagalay dadka isticmaala.
5. Waxaad bedeli kartaa xogta aan haboonayn ee macluumaadka la isticmaali karo
Iyadoo la adeegsanayo qoraalka HTML, waxaad u bedeli kartaa xogta aan haboonayn ee macluumaadka la isticmaali karo oo la akhrin karo. Uma baahnid wax xirfad barnaamij ah si aad u isticmaasho qalabkan. Waxay marka hore baari doontaa dukumiintigaaga HTML waxayna ku siin doontaa ugu yaraan 40 habaabin caadi ah si ay u kala doortaan, taasoo kuu sahleysa inaad ku soo dhejiso xogtaada.
6. Shabakada New York Times, CNN, BBC iyo Washington Post waa qaar ka mid ah bogagga ugu caansan ee wararka. Iyada oo soo saaraha qoraallada HTML, waxaad ka soo saari kartaa xogta ka iman karta goobahan. Waxay ku siin doontaa natiijooyin tayo leh oo aad ku hagaajinayso dhammaan khaladaadka waaweyn iyo kuwa yaryar. Iyada oo qalab this, waxaad abuuri kartaa content tayada iyo hesho laga soo saaro website-kaaga si aad ufilan mashiinka search sare.
7. Qorshaha lacag bixinta oo rogrogmi kara
Ugu dambeyn laakiin aan ugu yaraan, soo saaraha qoraallada HTML wuxuu ku habboon yahay bilawga iyo wuxuu la yimaadaa qorshooyin caymis oo kala duwan. Tusaale ahaan, waxaad dooran kartaa qorsheha aasaasiga ah haddii aad leedahay blog gaar ah oo aadan awoodi karin inaad iibsato heshiisyo qaali ah. Qorshaha aasaasiga ah wuxuu kuugu kici doonaa $ 20 bishiiba oo wuxuu furaa siyaabo badan iyo xulashooyin kuu gaar ah. Si kastaba ha ahaatee, maxkamadeeda 14 maalmood ayaa sidoo kale la heli karaa.